दीपकराज गिरी भन्छन्ः ताली र गाली दुवै सहन तयार भएर क्राइम पेट्रोलमा जोडिएको हुँ :: Setopati
दीपकराज गिरी भन्छन्ः ताली र गाली दुवै सहन तयार भएर क्राइम पेट्रोलमा जोडिएको हुँ
प्रभाकर गौतम काठमाडौं, असोज २६
तस्बिर सौजन्यः दीपकराज गिरीको फेसबुक
कलाकार दीपकराज गिरीले क्राइम पेट्रोल नेपाल होस्ट गर्ने कुराले धेरैको ध्यान खिच्न सफल भयो।
यतिबेला धेरैलाई क्राइम पेट्रोलमा दीपकको भूमिका के, कति र कस्तो भन्ने चासो बढेको छ। उसै पनि हाँस्य विधामा सफल दीपकले अपराध अनुसन्धानमा आधारित गम्भीर शृंखला होस्ट गर्ने खबर बाहिरिँदा कतिलाई अस्वभाविक लागेको थियो।
'दीपकराज गिरीले कमेडीभन्दा बाहिरको काम गरेको सुहाउला?'
धेरैको मनमा यो प्रश्न अझै बाँकी छ। यो आशंका अस्वभाविक होइन।
दीपकको करिअर २०४६ सालदेखि सभागृह र नाचघरका स्टेजबाट सुरू भएको हो। रेडियो, टेलिभिजन हुँदै सिनेमाको ठूलो पर्दासम्म दीपकले हाँस्यव्यंग्य विधामा चर्चा कमाए।
उनकै फिल्म छक्का पन्जा ३ को 'पहिलो नम्बरमा' गीतझैं रेडियो, टिभी वा सिनेमा सबैतिर उनको काम पहिलो नम्बरमा पुग्यो। रामविलास र धनियाँ, तीतो सत्यदेखि छक्का पन्जा शृंखलासम्ममा आइपुग्दा उनी कला क्षेत्रका कमेडियनबाट 'हिरो' बने।
यो सफलतामा हास्यव्यंग्य विधा नै आफ्नो परिचय र सफलताको आधार बनेको दीपकलाई हेक्का छ। यस्तो पृष्ठभूमिमा गम्भीर प्रवृत्तिको अपराध कथाको होस्ट हुनु उनी आफैंलाई पनि चुनौतीपूर्ण लागिरहेको छ।
यसअघि सेतपाटीसँगको कुराकानीमा उनले भनेका थिए, 'क्राइम पेट्रोलको प्रस्ताव आउँदा आफू सक्षम छु कि छुइनँ भनेर अल्झिएँ।'
यसपटक पनि उनको भनाइ उस्तै छ।
सेतोपाटीसँगको ताजा कुराकानीमा भने, 'अरूको काम कस्तो भयो भनेर खुट्याउन म माहिर हुँला। तर आफ्नै काम कस्तो भयो भन्न गाह्रो हुने रहेछ। सकेको प्रयास गरेको छु।'
क्राइम पेट्रोल नेपाल सोनी टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने भारतीय क्राइम पेट्रोलको आधिकारिक संस्करण हो। दसैंपछि प्रसारण हुने तयारी भइरहेको यो कार्यक्रममा दीपक सूत्रधारका रूपमा देखिने छन्।
रियालिटी सो र फ्रेन्चाइज कार्यक्रमहरू प्रसारण गर्ने सिलसिलामा दीपकलाई ग्यालेक्सी फोर के टेलिभिजनका म्यानेजिङ डाइरेक्टर रवि लामिछानेले कुनै हाँस्यप्रधान कार्यक्रम बनाउने प्रस्ताव गरेका रहेछन्।
दीपक भने तीतो सत्यपछि टेलिभिजनमा फेरि अर्को हाँस्यप्रधान कार्यक्रममा काम गर्ने मुडमा थिएनन्। त्यसैले उनले क्राइम पेट्रोलमा काम गर्ने इच्छा देखाए।
दीपकको कुरा सुनेर म्यानेजिङ डाइरेक्टर लामिछानेले भनेछन्, 'मैले त्यसरी सोचेकै थिइनँ।'
क्राइम पेट्रोलमा जोडिने बेला दीपकसँग दुई विकल्प थिए। एउटा आफ्नो कम्फर्ट जोनमा बसेर कमेडी कार्यक्रममा जोडिने वा यसअघि नगरेको कामको अनुभव सँगाल्ने।
दीपकका अनुसार क्राइम पेट्रोल होस्टका लागि केही नाम भारत पठाउने सूचीमा उनले आफ्नो नाम पनि थप्न लगाए। उताबाट पनि दीपकको नाम 'अप्रुभ' भएर आयो।
'टिभीमा तीतो सत्यको सेफ ल्यान्डिङ भइसकेको छ। तीतो सत्यसँग दर्शकको मीठो स्मरण जोडिएको छ। फेरि त्यही अध्याय दोहोर्‍याउँदा मजा नआउन सक्छ,' उनले भने।
उनको यही सोच नै क्राइम पेट्रोलमा फरक भूमिकामा देखिन मुख्य कारण रहेको उनको भनाइ छ। कोरोनाले फिल्म क्षेत्रको काम धिमा बनाइदिनु पनि उनी यही समयमा टेलिभिजनमा जोडिनु अर्को कारण हो।
दीपकको बुझाइमा तीतो सत्यमा काम गर्दा कार्यक्रम रूचाउने उमेर समूह तीसभन्दा माथिका बढी थिए। क्राइम पेट्रोलमा धेरै नयाँ पुस्ताका कलाकार संलग्न छन्। उनमा यो सोमार्फत् आफू पनि युवा पुस्तामा पुग्ने लोभ छ।
सोच जे भए पनि उनलाई थाहा छ, दर्शकमाझ उनको छवि अझै हाँस्य कलाकारका रूपमा छ। यो छवि तोड्न सजिलो छैन। अर्कोतिर हिन्दी क्राइम पेट्रोल हेरेका दर्शकले अवश्य भारत र नेपालको कार्यक्रमबीच तुलना गर्नेछन्।
कार्यक्रममा केही भाग छायांकन भइसकेका छन्। केही हुँदैछन्। सम्पदा मल्ल कार्यक्रमकी क्रिएटिभ प्रोड्युसर हुन्। नवीन अवाल, विकास न्यौपाने, निगम श्रेष्ठ, विशाल सापकोटालगायत नयाँ पुस्ताका निर्देशकले निर्देशन गर्ने क्राइम पेट्रोल १०४ भाग प्रसारण हुनेछ।
नो बडी प्रोडक्सन हाउसले निर्माण गर्ने यो कार्यक्रम एक वर्षसम्म हप्ताको दुई पटक प्रसारण गरिने छ। दीपक कथालाई जोड्ने र अगाडि बढाउने सूत्रधारका रूपमा हरेक भागमा कम्तीमा दुईदेखि पाँचपटक स्क्रिनमा देखिने छन्।
दीपक क्राइम पेट्रोलमा आफूले निर्वाह गर्ने भूमिकालाई निर्णायक मान्दैनन्।
'यो सो उत्कृष्ट भए म पनि पचाइन्छु। क्राइम पेट्रोलको कथा सशक्त भयो भने मेरो कामजस्तो भए पनि यो चल्छ। कथा कमजोर भयो तर मेरो भूमिका मात्र सशक्त भयो भने चल्दैन,' उनले भने।
दीपकलाई लागिरहेको छ, क्राइम पेट्रोलमा उनको नाम जोडिइसकेकोले चलेन भने मान्छेहरूले एक चरण उनलाई नै गाली गर्ने छन्। मन पराइयो भने त्यसको श्रेय पाउने सम्भावना पनि छ।
उनले भने, 'तपाईं घरमा आराम गरिराख्नुभयो भने कसैले गाली गर्दैन। तर जब जोखिम मोलेर कुनै काम गर्नुहुन्छ गाली र ताली दुवैका लागि तयार हुनुपर्छ। म पनि त्यसरी नै तयार भएर आएको हुँ।'
त्यसैले उनी जिस्केर क्राइम पेट्रोल समूहलाई भनिरहन्छन् रे, 'राम्रो काम गर्नुस् है साथीहरू। तपाईंहरूले बिगार्नुभयो भने मैले गाली खान्छु।'
आफ्नो छवि बदल्ने यो प्रयास असफल नै भए पनि कुनै खेद नहुनेमा उनी जोड दिन्छन्।
'मैले जीवनमा पहिलोपटक जोखिम मोलेको हो र,' उनले भने, 'जुन बेला हामीले छक्का पन्जा बनाउने भन्यौं, सिनेमामा लगानी गर्न कोही तयार थिएन। कतिले तँ सिनेमा बनाउने? तँ हिरो बन्ने? समेत भनेर प्रश्न गरे।'
छक्का पन्जा नबनाएर टेलिभिजनमा सीमित भएको भए अहिलेको परिवर्तन सम्भव नहुने उनको भनाइ छ। दीपकका अनुसार स्टेजबाट रेडियो, रेडियोबाट टेलिभिजन र टेलिभिजनका माध्यमबाट दर्शकमा जानु पनि जोखिम नै थियो।
आफ्नो स्वभाव नै जोखिम मोल्ने खालको भएको बताउँदै उनले भने, 'एउटा कथामा कतै नदेखिने नभेटिने छायामा पर्ने पात्रबाट म मात्र होइन। धेरै हाँस्य कलाकार भनेर खुम्च्याइएका हामी नायक भएका छौं। धेरैको जीवनस्तरसमेत उकासिएको छ।'
दीपक हाल एक वर्षसम्मका लागि यो कार्यक्रममा अनुबन्ध भएका हुन्। बलिउडका अमिताभ बच्चन, सलमान खानलगायत कलाकार पनि सिनेमा खेल्दै टेलिभिजनमा जोडिएको भन्दै दीपक टेलिभिजनमा नयाँ हिसाबले फर्किन चाहेको संकेत गर्छन्।
दीपक लाउड कमेडीबाट सफ्ट कमेडीमा रूपान्तरण हुँदै गएका कलाकार हुन्। त्यसैले साथीहरूसँग आफ्नो प्रस्तुति लाउड वा असुहाउँदो नहोस् भनेर सुझाव लिने गरेको बताउँछन्।
केही भाग खिच्दै प्रसारण हुने कार्यक्रम भएकाले दर्शकबाट आउने प्रतिक्रियाका आधारमा पनि आफ्नो प्रस्तुतिमा निखार ल्याउन सकिने कुरामा आश्वस्त छन्।
दीपकले भने, 'तीस वर्षमा मैले धेरै कुरा पाएँ। केही गुमाउँला भनेर डराउनु पर्ने अवस्था छैन। क्राइम पेट्रोल मेरो लागि चुनौती मात्र नभएर नयाँ सिकाइ पनि हो।'
प्रकाशित मिति: मंगलबार, असोज २६, २०७८, १३:४३:००